Macmacaan-ilmuhu: sida looga hortago maqaarka ka soo qallajinta iyo foosha? - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » DARYEELKA CAAFIMAAD Sweet-baby: sida looga hortago in maqaarka laga bilaabo qalajinta iyo foosha?
Macmacaan-ilmuhu: sida looga hortago maqaarka ka soo qallajinta iyo foosha?
Maqaarka iyo qallajinta qalalan ayaa sababi kara raaxo. Dhibaatadani waxay si gaar ah caadi u tahay xilliyada qaboobaha ama aad u kulul. Si kastaba ha noqotee, haddii aadan ku biirin maqaarka qalalan iyo daadinta xaaladaha cimilada, waa inaad raadsataa sababo kale.
Dhakhaatiirtu waxay yiraahdaan waa xun dheecaan maqaarka waxaa laga yaabaa inay la xiriirto la'aanta daryeel ku habboon iyo cudurrada qaarkood. Sababaha ugu caansan waa:
qaado qubeyska ama qubeyska marar badan;
Isticmaal badeecooyinka waxtarka leh marar badan;
cab cabir aan dheellitirnayn;
qaado daawooyinka qaarkood
Sawirqaade / Shutterstock.com
Iyadoo ku xiran sababahan kuwaas oo horseedi kara maqaarka qalalan iyo qallalan, waxaad samayn kartaa xeerar go'an. Maxaa la sameeyaa?
Ugu horreyntii, iska ilaali inaad qubeysid marar badan oo aadna yarayso walxaha, ugu badnaan hal mar toddobaadkii. Xusuuso inaad codsato qoyaanka, kareemada ama saliidaha dabiiciga ah jirka ka dib markaad maydho si aad u qoyso maqaarka.
Ka dooro alaabooyin aan lahayn cadar badan iyo midabeyn iyo iyaga oo ku daboolaya lakab ku filan maqaarka qoyan wax aan tirtirin.
Haddii aad ku aragto dilaac xun xitaa ka dib codsiga dhammaantood conseils, hubso inaad la tashato takhtar. Maqaarka qallalan wuxuu noqon karaa calaamad muujineysa dhibaatooyin caafimaad oo halis ah, oo ay ku jiraan:
cambaarta hidde ah (cambaarta);
cudurka shoogga suntan.
Waxaan rajeyneynaa in talooyinkani ay kaa caawin doonaan helitaanka iyo baabi'inta masuulkaaga maqaarkaaga qallalan. Waxaan sidoo kale kuu rajeyneynaa maqaarkaaga jilicsan oo aan jilicsanayn!
Isticmaalaha Twitter ayaa xisaabiyay in haweenku u baahan yihiin kaliya XAMARX Xadhiga oo dhan wareega
Sababta Aries waxay noqon kartaa lammaanaha ugu fiican Dhammaan calaamadaha jimicsiga!